Monday May 25, 2020 - 19:23:07 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya degmada Qansaxdheere ee Wilaayada Baay iyo Bakool ayaa sheegaya in ciidamada Itoobiya ee degmadaas xooga ku haysta ay rasaas ku fureen diyaarad kusoo degi rabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada.
Diyaarada oo la sheegay in ay u kiraysneed hay'adda WFP ayaa marka la rasaasaynayay waxay ku degi rabtay garoonka diyaarada ee magaalada Qansaxdheere halkaas oo ay gacanta ku hayaan ciidamo Itoobiyaan ah.
Rasaasta ay Itoobiyaanku ku rideen diyaarada oo ka dhacday qoryaha fudfudud ayaa diyaaradda ka haleeshay garbaha mana la sheegin wax khasaara nafeed ah oo soo gaaray dadkii saarnaa diyaarada.
Dhawaan ayay ahayd markii ciidamada Itoobiyaanku ay soo rideen diyaarad ku degi rabtay garoonka magaalada Bardaale ee isla Wilaayada Baay & Bakool halkaas oo ay ku burburtay diyaaradu ayna ku dhinteen lix qofood oo saarnaa.
Ciidamada Itoobiya oo markii dambe qirtay in ay iyagu soo rideen diyaarada ayaa ku andacooday in ay uga shakiyeen in diyaarada ay weerar kusoo aheyd oo ay leedahay Xarakada Al-Shabaab sida ay hadalka udhigeen.